Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IAmazon ithembisa izivumelwano ezintle ngexesha le-Cyber ​​​​ngoMvulo impelaveki
Phawula iikhalenda zakho kwimpelaveki yokonga. IAmazon namhlanje iveze umbono ocacileyo wamawakawaka abathengi abanokuthenga ngexesha le-Cyber ​​​​ngoMvulo wempelaveki, eqala ngoMgqibelo, nge-27 kaNovemba, kwaye iqhubeka ngoMvulo wama-29 kaNovemba.
Kuwo wonke umnyhadala wezivumelwano, abathengi banokufaka amanqaku okonga ngendlela engakholelekiyo kulo lonke udidi, kunye nezaphulelo ezinzulu kwiimveliso ezidumileyo kunye nezinto ekufuneka ubenazo kubandakanya i-elektroniki evela kwi-Samsung kunye ne-LG, izinto eziyimfuneko ekhaya nasekhitshini kuShark, Vitamix, kunye neCuisinart, kufuneka ube nezinto zokudlala. ukusuka kuHasbro, LEGO, kunye neCrayola, iintandokazi zobuhle ezivela kwi-Revlon, i-fashion top picks evela kuRay-Ban, kwaye ukhethe izixhobo ezinikwe amandla ze-Alexa ezifana ne-Amazon Fire TV 50 "4-Series. Kuyo yonke impelaveki, abathengi banokuthenga amawaka eentengiselwano ezimangalisayo kumaqabane athengisayo azimeleyo, uninzi lwawo angamashishini amancinci naphakathi, kubandakanywa amashishini aphuma ngabasetyhini, abantsundu, kunye namashishini osapho lomkhosi.
Kubathengi abafuna ingcebiso eyongezelelweyo malunga nokuba yintoni enokubapha abo babathandayo kulo nyaka, iAmazon ikugqumile. Ngalo lonke ixesha lonyaka abathengi banokuqhubeka nokuthenga kwaye bafumanise izinto kwezona zikhokelo zezipho zibalaseleyo eAmazon-kubandakanya uluhlu lweeToyi zeHolide ezidumileyo kunye noluhlu lwezinto eziziThandayo zika-Oprah, kunye neSikhokelo seZipho eziKhethiweyo zaBathengi kunye neeNgcali zeZipho zokuKhetha. Isikhokelo sesipho, esinokhetho oluphezulu oluvela kuluhlu luka-A oludumileyo njengoJessica Alba, uJojo Siwa, owafumana imbasa yegolide u-Suni Lee kunye ne-influencer duo Aint Afraid, kunye nemithombo yeendaba kubandakanya iBuzzFeed kunye neRefinery29, phakathi kwabanye.
NgoMvulo weCyber, iAmazon Live iya kubamba iminyhadala eyahlukeneyo ebukhoma ebonisa ukhetho olucetyiweyo lwezona zivumelwano zibalaseleyo, imiboniso yemveliso, ukuzama ukuhambisa, kunye neencoko ezibukhoma ezisingathwa ngabantu abadumileyo kunye nabaphembeleli, kubandakanya i-supermodel kunye nosomashishini uMiranda Kerr, imvumi yelizwe kunye nombhali weengoma uJessie James. Decker, kunye nefashoni u-Aimee Song. Ababukeli banokuthenga ngokulula iimveliso ezifakiweyo kunye nebhrendi ngecarousel ehlaziya ngexesha lokwenyani.
Apha ngezantsi kukho iisampulu zezivumelwano eziphezulu kunye neemveliso eziya kufumaneka ngeentsuku ezahlukeneyo kunye namaxesha phakathi koMgqibelo, Novemba 27, kunye noMvulo, Novemba 29, ngelixa unikezelo lusekho. Abathengi banokuthenga iintengiso ze-Cyber ​​​​ngoMvulo kwi-app ye-Amazon yokuthenga, okanye ngokubuza, "I-Alexa, zithini izinto zam?" Khetha iintengiso zeCyber ​​​​ngoMvulo nazo ziya kufumaneka kuzo zonke ivenkile yeenkwenkwezi ezi-4 kunye neendawo zokugcina iincwadi zeAmazon. Amalungu aziiNkulumbuso angonwabela imizuzu engama-30 yokufikelela kwangoko kwezona zivumelwano zishushu zoMbane eAmazon ngalo lonke ixesha leholide, kwaye yonke imihla.
Izinto zokudlala kunye neMidlalo: Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwiiseti zezakhiwo ezikhethiweyo, kubandakanywa ne-LEGO kunye ne-Playmobil. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwimidlalo ye-Hasbro. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kwizinto zokudlala zobugcisa kunye nezobugcisa ezivela eCrayola kunye nezinye iimpawu. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwimidlalo yebhodi ekhethiweyo kuquka iCatan kunye neTikiti lokukhwela. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwiikiti zemfundo ze-Osmo kunye nemidlalo. Yonga ukuya kutsho kuma-30% kwiZibonelelo zokuFunda kunye neeToyi zokufunda eziBonisa iMfundo.
Ifashoni yexesha lonyaka: Gcina ukuya kuthi ga kwi-40% kwiibhatyi ezikhethiweyo ze-Orolay kunye neepaki.Gcina ukuya kwi-30% kwiiCrocs ezikhethiweyo. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kwiibras ezikhethiweyo zeNyaniso & Co. kunye nempahla yangaphantsi. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kwiiglasi zelanga ezikhethiweyo zikaRay-Ban. Gcina ukuya kuthi ga kwi-20% kwiimpahla zangaphandle ezikhethiweyo ezisuka kuCalvin Klein, uTommy Hilfiger, DKNY, nangaphezulu. Yonga ukuya kuthi ga kwi-25% kwisikipa esenzelwe wena. Yonga ukuya kuthi ga kwi-25% kwizitayile ezisebenzayo kunye neendawo zokuphumla ezisuka kwaShopbop, kuquka iHoneydew Intimates, iZ Supply, kunye neAlala.
Ikhaya neKhitshi: Gcina ukuya kuthi ga kwi-35% kwizinto ezikhethiweyo zePot ekhethiweyo, kwaye ukhethe izinto zokupheka kunye nekhitshi eziyimfuneko kwi-All-Clad, i-Ninja, i-Vitamix, i-Calphalon, i-Cuisinart, kunye ne-SodaStream. Yonga ukuya kuthi ga kwi-31% kwiivacuum ze-iRobot Roomba, khetha izicoci zomoya ezisuka eBlue Air naseCoway, kunye noomatshini bokuthunga abasuka kuMzalwana noSinger. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwifenitshala ekhethiweyo.
ZeWindows: Gcina ukuya kuthi ga kwi-33% kwiiTV ezikhethiweyo ezivela kwi-Samsung, i-Sony, kunye ne-LG. Gcina kwii-headphone ezikhethiweyo ezivela kwi-Bose, i-Sony, kunye ne-JBL. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwiimonitha ze-HP ezikhethiweyo, iilaptops, kunye nee-desktops zonke-ezinye. Gcina ukuya kuthi ga kwi-34% kwiifreyimu zemifanekiso yedijithali ye-Nixplay. Gcina i-20 yeedola ngokukhetha abalawuli beNintendo Switch Pro. Yonga i-25% kwi-MYNT3D Professional Printing 3D Pen.
Ubuhle kunye Nokhathalelo Lomntu: Yonga ukuya kuthi ga kwi-50% kwiibrashi zamazinyo ezikhethiweyo ezivela kwi-Oral-B kunye ne-Philips Sonicare. Yonga ukuya kuthi ga kwi-39% kwiisheva zombane, iincakuba, kunye neebhleyidi ezivela eBraun, eGillette, nangaphezulu. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kukhathalelo lweenwele ukusuka kwi-Revlon, i-Bed Head, kunye nezinye iimpawu. Yonga ukuya kuthi ga kwi-52% kwiiKhiti zoVavanyo lwe-DNA yeNkonzo ye-23andMe Personal.
Uhlobo lweAmazon: Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwiimveliso zasekhitshini ze-Amazon Basics. Yonga ukuya kutsho kwi-30% kwiimpahla zabantwana neentsana ezisuka kwii-Brand Zethu. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kwikofu evela kwii-Brands zethu.
Izixhobo zeAmazon: Gcina ukuya kuthi ga kwi-47% kwi-Echo Show 5. Gcina ukuya kuthi ga kwi-45% kwi-Amazon Halo Band fitness tracker. Gcina ukuya kuthi ga kwi-40% kwi-Kindle kwaye ukuya kuthi ga kwi-28% kwi-Kindle Paperwhite Kids. Gcina ukuya kuthi ga kwi-40% kwi-Fire HD 10 Kids Pro tablet. Gcina ukuya kuthi ga kwi-36% kwiFire TV Stick 4k Max. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwi-Amazon Fire TV 50” 4-Series.
UPhuculo lweKhaya, izixhobo, kunye neGadi: Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwizinto ezikhethiweyo ze-BLACK+DECKER. Gcina kwizixhobo ezikhethiweyo ezivela kwi-DEWALT, GEARWRENCH, kunye ne-SKIL. Yonga i-25% ngokukhetha iNqanaba lokutshixa i-smart Home. Gcina ukuya kuthi ga kwi-40% kwiindawo zokuhlambela kunye namachibi asuka e-Bestway kunye nokunye.
Umntwana: Gcina kwizinto eziyimfuneko ezikhethiweyo zomntwana kwiPhilips Avent. Yonga kwiimveliso ezikhethiweyo zokutyisa ezivela kuGqr. Brown ezifana neebhotile kunye neepacifiers. Gcina kwiCybex gb Pockit strollers. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kwizitulo ezikhethiweyo zemoto yeBritax. Yonga i-25% ekukhetheni uKhuseleko 1st Khulisa kwaye Hamba izihlalo zemoto. Ukongeza, gcina kwizinto ezikhethiweyo ezivela kuJoovy ngeli xesha leholide.
I zi lwanyana: Yonga i-30% kwizipho ezikhethiweyo zesilwanyana sasekhaya kunye nezibonelelo, kubandakanya iithoyi, ukuphatha, iibhedi, kunye neekhreyithi. Yonga ukuya kuthi ga kwi-25% kwizinto ezikhethiweyo zokhathalelo lwesilwanyana sasekhaya saseBissell. Yonga i-20% kwi-Petmate Husky Dog House ukwenzela izinja ukuya kuma-90 eeponti. Fumana isampuli yasimahla yemveliso entsha yeGreenies, ngelixa unikezelo lusekho.
Ezemidlalo naPhandle: Yonga ukuya kutsho kuma-30% kwiibhotile zamanzi ezikhethiweyo zeNalgene. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwiimveliso ezikhethiweyo ze-Weider Platinum Amandla. Gcina ukuya kuthi ga kwi-30% kwiibhotile ezikhethiweyo zeCamelBak kunye nezixhobo. Yonga ukuya kuthi ga kwi-30% kwii-scooters zombane ezikhethiweyo, iiracks zebhayisekile, kunye nezitendi ezisuka eSegway, Hover-1, nangaphezulu.
Ukuzonwabisa: Gcina ukuya kuma-50% kwi khetha iVidiyo eyiNkulumbuso Iimuvi onokuziqasha okanye uzithenge, ukusuka kwizinto ezintsha ukuya kwezakudala, kunye neenkqubo zeTV ezibethayo, umxholo wamaxesha onyaka, nokunye. Kwaye, abathengi abatsha bafumana i-50% yesaphulelo kwi-NBA League Pass kunye ne-NBA Team Pass yomrhumo emva kovavanyo lweentsuku ezisixhenxe. Gcina ngeAmazon Music Unlimited, simahla iinyanga ezintathu kubathengi abatsha, okanye simahla iinyanga ezintandathu ngokuthenga izixhobo ezikhethiweyo zeAmazon Echo. Kwaye, abathengi banokumamela iipodcasts zabo ezithandekayo zeWondery kunye ne-40% yesaphulelo sonyaka omnye wokubhalisa kwi-Wondery +. Yonga ukuya kuthi ga kwi-59% kubulungu obutsha bonyaka ukuze IMDbPro. Abafundi bangonga ukuya kuthi ga kwi-80% kwi ii-eBooks ezidumileyo, ukuya kuthi ga kwi-50% ekukhethweni Bundle izihloko ezizodwa, kwaye ukuya kuthi ga kwi-30% kwi Ivili leXesha iiseti zebhokisi.
UHambo oluNgcono kunye namava: Kwabo bakuluhlu lwakho abanayo yonke into okanye abafuna amava, gcina ukuya kuthi ga kwi-50% kuwo onke amava okuhlola ama-Amazon, aphethwe ziingcali zasekhaya. Abathengi base-US banokufikelela kuluhlu olubanzi lwee-livestreamed, amava asebenzisanayo kwihlabathi liphela-bonke besuka kubutofotofo bamakhaya abo. Abathengi banokuthenga izinto ezizodwa, bafunde indlela iiholide ezibhiyozelwa ngayo kwihlabathi jikelele, kunye namava ezipho kubahlobo kunye nosapho lwabo.
Thenga kwaye uxhase amashishini amancinci naphakathi
I-Amazon ibamba ngaphezu kwe-500,000 yamaqabane athengisayo azimeleyo ase-US, uninzi lwawo ngamashishini amancinci naphakathi, kwivenkile yawo kwaye inceda ukuba bafikelele kumakhulu ezigidi zabathengi kwihlabathi jikelele, ukwandisa ukuthengisa kwabo, kunye nokudala imisebenzi-kuquka uqikelelo lwe-1.8 yezigidi zase-US- imisebenzi esekelwe kwi-2020. Abathengi banokuxhasa la mashishini amancinci naphakathi kwaye bagcine izipho ngokuthenga iBhizinisi eliNcinci, i-Amazon Handmade kunye ne-Amazon Launchpad izikhokelo zesipho.